Ball Madax, Hubi Madax, Gate Madax - Newsway
Waxaan ku takhasusay fureyaasha kubbadda, filtarka albaabka, jeegaga lagu baaro, wiishka adduunka, qalabyada balanbaalis, furayaasha fur, fiiqfurka, kontoroolada xakamaynta. Alaabta
API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Haddii aad u baahan tahay shahaadooyinkeenna, fadlan nala soo xiriir sales@nswvalve.com )
Warshadaha qasabka iyo Waraaqda
KIIMIILKA IYO SHAQAALAHA
DHAQAALAHA WARQADAHA IYO WARQADDA
Newsway Madax Val., Waxaan diiradda saarnaa naqshadeynta, horumarinta, soosaarka. Newsway Valve waa kuwo si adag u waafaqsan nidaamka tayada caalamiga ah ee heerka ISO9001 ee wax soo saar. Wax soo saarkeenu wuxuu hayaa nidaamyo naqshadaysan oo kombiyuutar lagu caawiyo iyo qalab kumbuyuutar casri ah oo wax soo saar, soo saarid iyo tijaabin ah. Waxaan leenahay koox kormeer ah si aan u xakameyno tayada filtarka si adag, kooxdayada kormeerka waxay kormeeraan qalabka ka soo baxa marka ugu horeysa illaa xirmada ugu dambeysa, waxay kormeeraan hanaan kasta oo wax soo saar ah. Waxaan sidoo kale lashaqeyneynaa waaxda kormeerka seddexaad si aan uga caawinno macaamiisheenna inay kormeeraan qalabka lagu xiro ka hor rarka.
SOO SAARAHA QALABKA QALABKA NIDAAMKA KONTOROOLKA TIRADA EE ISO9001 KOOXDA XIRFAD LEH GUDDIGA SHAQADA KA DIB
Soo saaraha waalka xirfadeed
Company Madax Newsway ayaa ku hawlan soo saarka waalka muddo ka badan 20 sano oo uu leeyahay waayo aragnimo qani ah ee design iyo wax soo saarka biiyaha. Shirkadda Our xajiya qalabka wax soo saarka iyo processing joogto ah updated si loo hubiyo in wax soo saarka sax processing iyo hufnaan.
Nidaamka xakamaynta tayada adag
Marka loo eego nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001, Shirkadda Newsway Valve Company waxay si adag u xakamaysaa tallaabo kasta oo ka timaadda tuubada tuubada ilaa mishiinka illaa ururinta, rinjiyeynta, iyo baakadaha si loo hubiyo in fureyaasha laga soo saaray warshadda ay 100% u qalmaan
Shirkadda Newsway Valve Company waxay ku qalabeysan tahay waaxda wax soo saarka, waaxda farsamada, waaxda iibka, waaxda tayada, waaxda dukumintiyada, waaxda maaliyadda iyo waaxda iibka kadib si ay macaamiisha ugu adeegaan si ka dhakhso badan.
Ballanqaadka iibka kadib
Shirkadda Newsway Valve Company waxay ballanqaadaysaa: Haddii macaamiisha ay helaan dhibaatooyin xagga tayada ah, waxaan ka caawin doonnaa macaamiisha bixinta adeegyo dayactir ama beddelaad lacag la’aan ah. Ka caawi macaamiisha inay si dhakhso leh wax uga qabtaan dhibaatooyinka